सुनको भाउ अहिलेसम्मकै उच्च, कति पुग्यो तोलाको ? « Sansar News
सुनको भाउ अहिलेसम्मकै उच्च, कति पुग्यो तोलाको ?
९ फाल्गुन २०७६, शुक्रबार १२:४६
९ फागुन, काठमाडौं । निरन्तर महंगिएको सुनको भाउ आज तोलाको ७८ हजार नाघेको छ। शुक्रबार तोलामा ५ सय रुपैयाँ बढेर तोलाको ७८ हजार १ सय रुपैयाँ पुगेको नेपाल सुनचाँदी व्यवसायी महासंघले जनाएको छ । यो अहिलेसम्म कै महङ्गो भाउ हो ।
गएको फागुन १ गते तोलाको ७६ हजार रुपैयाँमा कारोबार भएको सुनको भाउ त्यसयता नौ दिनमै तोलामा २१ सय रुपैयाँ बढेको छ । चीनबाट सुरु भएको कोरोना भाइरस विश्वमै फैलिएपछि सुनको माग बढेको र भाउ अझै बढ्ने संकेत देखिएको महासंघको भाउ निर्धारण समितिका संयोजक तेजरत्न शाक्यले जानकारी दिए ।
यसैबीच, सुनको भाउ बढेसँगै कारोबार घट्दै गएको व्यवसायीले बताएका छन् । माघ महिनामा विवाहका लागि दैनिक दैनिक २० किलोसम्म सुनको कारोबार हुने गरेकोमा भाउ बढेसँगै माग घट्दै गएको छ । अहिले दैनिक १०-१५ किलोसम्म मात्रै सुनको माग हुने गरेको छ ।